version 0.8.4 – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူ့ဘာသာပြန်ချက်ကဒီမှာ
စက်တင်ဘာလ 7, 2012 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု6comments
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ plugin ကိုဤလွှတ်ပေးရန်ကိုဆက်ကပ်ရန်အလွန်မာနကြီးသောသူများမှာ.
ဒီဗားရှင်း, ပုံမှန်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့် bug ကိုပြင်ဆင်ချက်တွေအပြင်, နှင့်အတူအခြေခံပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူ့ဘာသာပြန်ချက်နောက်ဆုံးတော့ပေါင်းစပ်ပြီး OneHourTranslation.com ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ချက်ဝန်ဆောင်မှု.
ကိုသွားပါ OneHourTranslaion.com အကောင့်တစ်ခုဖွင်ဖန်တီး
ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကောင့်အသေးစိတ်ကိုကိုသုံးပါနှင့် Transposh ရဲ့ settings စာမျက်နှာမှသူတို့ကိုထည့်သွင်း
ထိုဘာသာပြန် interface ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, တစ်ခု admin ရဲ့ (သာတစ် admin ရဲ့) တစ်ဦးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် “တစ်နာရီဘာသာပြန်စာပေလူတန်း” ကြယ်သီး
ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့လူတန်းဖို့ထားသောစာပိုဒ်တိုများထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်, အခြား click နှိပ်ပြီးပစ္စည်း dequeue လိမ့်မယ်
ဒါကြောင့်တစ်နာရီပေးပါ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေဒါမှမဟုတ်အဲဒီထက်နည်း) နှင့်ဘာသာပြန်ချက်များကိုသင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
လူတိုင်းကမင်္ဂလာရှိ၏နှင့်သင်အမှန်တကယ် Transposh စီမံကိန်းကိုအထောက်အပံ့ (နွေရာသီ!)
ဒီအစားအသစ်ဖြစ်၏, ဒါကြောင့် Murphy ကရိုက်မယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ကို့ကိုဆက်သွယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းငှါအကြင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးမယ်.
တန်ဇန်းနီးယားမှဆွာဟီလီ၏ပုံသေအလံ Ed ကယော်ဒန်မြစ်နားမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း
ရွေးချယ်ထားတဲ့ element ကိုအောက်ပါ default ဘာသာစကားအတွက်ဘာသာပြန်ရန်ပြီးမှနေတဲ့အချိန်မှာ parser ကို bug ကိုအဘို့အ Fix
အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြ Fixed XSS Infern0_ (ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတင်စကား!)
Programmer တွေအဘို့အ: လက်ရှိဘာသာစကားပြန်လာပါရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ function ကို Added “transposh_get_current_language()“
ကျွန်တော်တို့ W3C validation ကိုရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးတဲ့ backslash ပါဝင်သော Fixed widget က၏ ID
Updated jQueryUI 1.8.23 jQuery နဲ့ပဋိပက္ခမှရှောင်ရှားရန် 1.8 အချို့သော themes များကအသုံးပြု
ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) အားဖြင့်ဘာသာပြန်ချက် Amilton Junio​​r
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operator များမှသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်, သင်ကအလုပ်ရှုပ်နေ signal ရအောင်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဆက်သွယ်ခြင်းကြိုးစား!
P.S. ဒီအောင်မြင်ပြီးမှအရမ်းပထမဦးဆုံး version ဖြစ်သည် 1,000 နေ့စဉ် downloads,, ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: အလံများ, အသေးအဖွဲ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ချက်, လွှတ်ပေး, securityfix